YEYINTNGE(CANADA): ဒန်ကလီနဲ့ ကျော်ဆန်း
နအဖ အကြောင်းကိုသူအသိဆုံး အတတ်ဆုံး လို့ ကြွေးကြော်လေ့ရှိတဲ့ ရော့စ်ဒန်ကလီရဲ့ဘ၀ဟာ သိပ်တော့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ ဒီနေ့ ကျော်ဆန်းရဲ့ ဘလောက်ဖြစ်တဲ့ ပိတောက်မြေမှာ သူကိုလိင်ကိစ ၊ဆေးခြောက်ကိစ္စ စတဲ့အမှုတွေကိုကျူးလွန်ထားတဲ့အတွက် သူကို အရေးယူရတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းထားပါတယ်။ ကမာရွတ်ရဲစခန်း ကနေသူကို အင်းစိန်ကို ပို့ လိုက်ကြပါပြီ။
ဒန်ကလီကိုဖမ်းဆီးထားအတွက် မြန်မာပြည်ကသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ ဒါပါပဲလို့ နိင်ငံတကာက ကောက်ချက်ချမှာကို ကြိုကန်ထား လိုက်တာပါ။၀ါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ နအဖ သံမှုး က အမေရိကန် အစိုးရ ဌာန ( State Department ) ကို ဒန်ကင်ကိုဖမ်းတာဟာ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ရာဇ၀တ်မှုကိုကျူးလွန်လို့ ပါ။ တရားဥပဒေအရ သူရင်ဆိုင်ရမှာပါလို့တိုးတိုးတိတ်တိတ် အကြောင်းကြားထားတယ်။ အမေရိကန်တွေလည်း ဘာမှမပြောနိင်ဖြစ်နေတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အမှတ် ၈၈ ၊ စတင်းလမ်း က သြစတေလျသံရုံ မှာတဆင့် သြစတေးလျအစိုးရ ကိုလည်း ဒန်ကင်ကို ရာဇ၀တ်မှုအရအရေးယူထားရကြောင်း အကြောင်းကြားထားပါတယ်။
မြန်မာတိုင်းမ်စ် နဲ့ နအဖ တည့် နေတုံးက ဒန်ကင်နဲ့ ကျော်ဆန်းဟာ ငါး ထည်ရွက်များလို တပူးတွဲတွဲရှိလှတယ်။ နှစ်အိမ်တအိမ် ချောင်းပေါက်နေတယ်လို့ ဓါတ်သိတွေကဆိုကြတယ်။ ဒန်ကင်ကို သူရုံးက မြန်မာ သတင်းထောက်မလေးတွေကချစ်စနိုး နဲ့ ဦးဒန် လို့ ခေါ်သလို ကျော်ဆန်းကလည် ဦးဒန်လို့ ခေါ်တယ်ဆိုပဲ။ ဒန်ကင်ကလည် တပြုံပြုံနဲ့ သဘောကျတယ်။ မြန်မာ လို မပီကလာပီကလာနဲ့ သူနာမည်ကိုတောင် ဥတန် လို့မိတ်ဆက်လေ့ရှိတယ်။
ပြီးခဲ့နစ်များက မူးယစ်ဆေးဝါးနိမ်နင်းတဲ့ပွဲမှာ နအဖ မူယစ်ဆေးဝါးတွေကိုဟန်ပြမီးရှို့ ဖျက်ဆီးပြတဲ့ပွဲမှာ ဒန်ကင်ကိုလည် နအဖ က ပွဲထုတ်ပါတယ်။ ကျော်ဆန်း က ဒန်ကင်ကို ဖိတ်တယ်။ သံတမာန်တွေက ဘိန်းဖြူတွေ ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေဟာ အစစ်မှဟုတ်ရဲ့ လား လို့ သံသယရှိတာကို နအဖက ရိပ်မိတယ်။ ဒန်ကင်ကလည်းရိပ်မိတယ်။ ရေငတ်တုံးရေတွင်းထဲကျ ဖြစ်သွာတဲ့ ဒန်ကင်ကြီးက ဘိန်းဖြူ တကော်လော ဇတ်ကနေဲ့ ယူပြီ နှာခေါင်း အားပါးတရ တချက် ရှို က်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် သံတမန်ကြားကသံသယကို သူပြေပျောက်စေတယ်။ ပြီတော့ ဖီလင်အပြည့်နဲ့စစ် တယ် လို့အတည်ပြုပေးခြင်းအားဖြင့် နအဖရဲ့ အရှက်ကို ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒါလေးတွေကြောင့် ဒန်ကင်ကို နအဖ က ချစ်ခဲ့ရတဲ့ကာလတွေ။
ဒန်ကင် မူးယစ်ဆေးဝါးပွဲက အပြန်မှာ ကျော်ဆန်းက အလိုက်တသိနဲ ဘိန်းဖြူ့ ခြူးကမ္ဘာ စစ်စစ် တထုတ် ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ အိမ်မှာအလှထားဖို့ ဘိန်းသီး အခြောက်လေးတွေကိုလည်းပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ ကားပေါ်မှာ သူနဲ့ ပါလာတဲ့ နယူဇီလန်းသတင်းထောက်ကို သြစတေးလျလေသံနဲ့အားပါတရ
To dye ( Today) Holly Shit , Heroine is much better than Coke ။ ဒီနေ့ကွာ တကဲ့သောက်ကြိုးနဲမပဲ ။ ဘိန်းဖြူ များကောင်းချက် က ကိုကင်းထက်သာ သကိုးကွဲ့။ Kyaw San is so sweet . (ကျော် ဆန်း ကသိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ )
ဒါတွေက အတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီ။ ခုတော့ဒန်ကင်မလိုတော့ဘူး။ အစိုးရအသစ်တောင်ဖွဲ့ ပြီးပြီ၊ နိင်ငံတကာကလည် မထောက်ခံခြင်သောလည်း အသည်းအသန်မကန့် ကွက်ကြပေဘူး။ ဒန်ကင်ရှိနေခြင်းအားဖြင့် သူတို့ အတွင်းရေးတွေ အကုန်သိကုန်မယ်။ ဒီတော့ဒန်ကင်ကို အပြစ်ရှာပြီး ကိုင်တော့တယ်။ ဒန်ကလီဟာမီဒီယာသမား ဖြစ်တဲ့အတွက် နအဖ က ဒန်ကလီကိုလျော့တွက်လို့ မရတော့ဘူး။ အသေကိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒန်ကလီကိုဒီအတိုင်းလွတ်လိုက်ရင် နအဖနဲ့ ခွာပြဲလာတဲ့ ဒန်ကလီကလည်း နိင်ငံတကာမီဒီယာမှာ ကောင်းကောင်းကိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နအဖတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုသူဖေါ်ထုတ်မှာပါ ။ သူရထားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်တဲ့ ခင်ညွန့် နောက်ဆုံးအခြေအနေ၊ မူယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုမှာ တပ်ချုပ်ကြီ မိသားစုပတ်သက်နေပုံတွေ၊ ကကကြိုင် တရုပ်ပြည်မှာ ၀ယ်ထားတဲ့ဒေါလာ သန်း၄၀ ကျော်တန်တဲ့ အိမ် ၊ တပ်ချုပ်ကြီး မိသားစုအတွင်းရေးအရှုပ်တော်ပုံတွေ ဒါအပြင်
စီးပွားရေးသမား တဦးဖြစ်တဲ့ မိုးကျော်သောင်းနဲ့ တပ်ချုပ်ကြီးမိသားစု ဆက်ဆံရေး ( တပ်ချုပ်ကြီး လိုခြင်နေတဲ့ နိင်ငံခြားက ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ၊ တပ်ချုပ်ကြီးမြေးတွေအတွက် ပညာရေးတွေကို မိုးကျော်သောင်းက လျိုလ်ဝှက် လုပ်ဆောင် ပေးနေရပုံတွေ) ။ ဗိုလ်ချုပ် သိန်းဆွေသမီး မာလာမော်ကို ဗြိတိသျသံရုံက ကောင်ဆယ်လာနဲ တူနှစ်ကိုယ့် နီးစပ် နိင်ရေးအတွက်ဒန်ကင် အောင်သွယ်ပေးခဲ့ရပုံတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကတော်တွေ၊သမီးတွေ၊ခယ်မတွေ၊ ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေ ရဲ့ ကိုယ်ရေးအတွင်းးရေးသတင်းတွေက သူမှာ ဖိုင်လ် အတွဲလိုက်ရှိနေပါတယ်။ ( ဒါတွေက သြတေးလျမှာ သိမ်းဆည်းထားပြီုးဖြစ်ပါတယ်။ )
ဒါကြောင့်ဒန်ကလီကို နအဖ က အသေကိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒန်ကင်ကို စွပ်စွဲထားတဲ့အမှုတွေကလည်း ကြည့်ပါဦး ။ မဖွယ်မရာ လိင်ဆက်ဆံမှု ( Sadistic Sex ) နဲ့မူးယစ် ( Drug) တွေနဲ့ မှမလုံလောက်သေးရင် လက်နက်ကြီး ကိုလည်သုံးမယ်။ တခါတည်းပွဲပြီးမဲ့ကိစ္စကို ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကတော့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုမဖွယ်မရာပြုမှု (Child molestation) နဲ့ ပါကိုင်ဖို့ အတွက်အချက်အလက်တွေစုဆောင်းနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဒန်ကင်ကလည် ဒန်ကင် ရန်ကုန် ခေတ်ပျက်သူဌေးသမီးများလောက ကတောင်အော်ကြော်လံကြရတယ်ဆိုပဲ။
ရန်ကုန်က မျက်နှာကြီးလှပြို ဖြူ လောကမှာဒန်ကင်ကိုဖမ်းတဲ့အတွက်မျက်ခုံးလှုပ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့ ဒန်ကင်နဲ့ ဖက်လည်တကင်းလုပ်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို ဖေ့ဘုတ်တွေကအမြန်ဖြုတ်ချနေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကတုံးပြောင် ဒန်ကင်ဟာ ခေတ်ပျက်သူဌေးက၊မိန်းမလျာ၊ မော်ဒယ် ပြို ဖြူ တွေ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အတော်မျက်နှာပန်းပွင့် ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မှတ်တမ်းတွေအရ
မြန်မာပြည်မှာ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးချီးပူး ခမြာ ချီးပူးခြင်တူသောလည်း ပြည်တွင်းဖြစ် ( Loacal made) ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တော အရက်လေနဲ့ ပဲအဖေါ်ပြုခဲ့ရပြီ အေးဘုံ တွေ ဗွေထုတ်တို့ နဲ့ ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရတာပါ။
ဒန်ကင်လို’’ ဒန်တန့်တန် - ဒန်တန့်တန် ‘’ သိပ်မဖြစ်ခဲ့ရရှာပါဘူး ။ ဒါကလည်း နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေ က ဒန်ကင်ကို အသေကိုက် ( Vital Bite) စေချင်တဲ့အဓိက အချက်တခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် လို့ အမည်မဖေါ်လို တဲ့ ဒန်ကင်တပဲ့ သတင်းသမားတဦးကဆိုပါတယ်။
အရင်ကပါတီပွဲတွေ မှောင်ရိပ်ခို ပွတ်သဘင် ပွဲတွေမှာ ဗိုလ်ချုပ် သား တွေသာအပြိုင်အဆိုင် ရေပန်းစားနေတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာ ထိုးထိုးထွန့် ထွန့် ရှိလှတဲ့ဒန်ကင်ရောက်လာကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်သားတွေဟာ ဒေါ်လာငွေလိုပဲ ဈေးထိုးကျလာတယ်။
ဈေးကျရတဲ့အကြောင်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်တွေရော၊ သူတို့ သားတွေ ဟာ လူတောသိပ်မတိုးဘူး ။ပါတီတွေဘာတွေမှာ အပေါင်းသင်းမဆံကြဘူး။ ဒီဒန်ကင်ကိုမယှဉ်နိင်ဘူး။ ဒီတော့ ကျော်ဆန်း ကို တာဝန်ပေးတော့တယ်။ ဒန်ကင်ဘာလုပ်၊ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ဆိုတာတွေကို ၂၀၁၀ အဆန်း ပိုင်းကထည်းက ထောက်လှမ်းတော့တယ် လို့ သိရတယ်။ ဒန်ကင်ကို ကြိုးနဲ့ တုတ်ပြီ တကျင်လျိုလ်ရမဲ့တာဝန်ကို ကျော်ဆန်း ကိုပေးထားတယ်လို့ သိရတယ်။ ကျော်ဆန်းကလည်နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေထဲမှာ ဖုတ်လေတဲ့ငပိရှိတယ်လို့ တောင်မထင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာ တိုက်ခံတွေကိုဖမ်း ဟယ်ဆီးဟယ်လုပ်မှ သတင်းစာရှင်းလင်ပွဲမှာ တချက်တချက်အနံဆိုးရတဲ့ဘ၀နဲ့ ကျေနပ်နေရတာပါ။ ပိတောက်မြေဘလောက်လေးကိုနဲ့ ပဲကျေနပ်နေရတာပါ။ ဒါပေမဲ့သူဟာ ကြိုးစားတယ်။ သူဘ၀တက်လမ်းကိုရှာနေသူပါ။ ခုတော့ ဒန်ကင်ကိုဖြိုခွင့်ရရင် မြန်မာတိုင်းမ်စ် တည်းဟူသောသတင်းစာတိုက်ကြီး ကို သူဦးစီးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အစုရှယ်ရာပိုင်ရှင်က ဒေါက်တာ တင်ထွန်းဦးပါ။ သူကိုလည်း နအဖ က ကိုင်ရမှာသိပ်ခက်တယ်လို့ မယူဆဘူး။ သူကလည်း ရနောင်းကိုသွားသွား ပြီ အပေါစား ပြည့်တန်ဆာခန်းတွေကို သွား လေ့ရှိသူဆိုတော့ စစ်ရေးအခြေပြဇယား နဲ့အသာဆွဲလိုက်တာနဲ့ ရနေပြီ။ နအဖက ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး ကိုတော့ ကိုယ်ခြံထဲက ကြက်လောက်ပဲ သဘောထားတယ်။ ညနေစောင်ရင် .. ဒီ .. ဒီ..ဒီ ။ ခေါ်လိုက်ရုံနဲ့ ရတယ်။ အချိန်တန်လို့ မှာ ပြန်မလာရင် ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး ဆိုသော အနှီ ကြက်ပျော့ ကြီးသည် ဟင်းအိုးထဲတွင်မှာ ဘူးသီ ကာလသားချက်ဘ၀နဲ့ နိဂုံချုပ်ခံရမှာပါ။
ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်း ဘာလုပ်လုပ် သူတို့ တတ်သမျှ စစ်ရေအခြေပြဇယား နဲ့ ပဲတိုင်းထွာလေ့ရှိတာပါ။ ဒန်ကင်ရှိနေတာဟာ သူတို့နောက်ဖေးတကားမလုံဘူးလို့ ယူဆနေတာကြာပါပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကျော်ဆန်း ကို တာဝန်ပေးတော့တယ်။ ဒန်ကင်ဘာလုပ်၊ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ဆိုတာတွေကို ၂၀၁၀ အဆန်း ပိုင်းကထည်းက ထောက်လှမ်းတော့တယ် လို့ သိရတယ်။
ဒီတော့ ဒန်ကင်ကို ညီမျှခြင်ချကြည့်ကြတယ်။ ဒန်ကင်ကြောင့်ရတဲ့ သူတို့ဖက်ကနိင်ငံရေးအမြတ် ညီမျှခြင်း
ဒန်ကင် အပေါင်း သူတို့ ခယ်မ၊သမီး၊အိမ်ကဟာကြီး တွေ ဆိုတော့ …. ။ မကိုက်ဘူး။ အနှုတ်လက္ခဏာပြနေတယ်။ ဒါကြောင့် နအဖနဲ့ ဒန်ကလီတွေရဲ့ဖြုတ်ထုတ်သတ် ပွဲဟာ တကယ့်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတခုဖြစ်လာမှာပါ။ မန်ယူနဲ့ချားလ်စီး ပွဲထက်သာမှာပါ။ ကျားနဲ့ဆင်လယ်ပြင် မှာတွေ့ ကြတဲ့သူသေကိုယ်သေဆော်ပွဲတခုလို ကြည့်ကောင်းမှာပါ ။
ရန်ကုန် ရေပေါ်စီလောကမှာတော့ သူတို့ ဘောဒါကြီ ဒန်ကင်သတင်းဟာ လောလောဆယ်ပျံနေတယ်။ တယောက်တပေါက်ပြောနေကြတယ်။
‘’ ကကကြိုင်တရုပ်ပြည်မှာအိမ်ဝယ်တာသူကသိနေလို့။ အော် ပျားအုံမှထုတ်နဲ့ သွားထိုးမိတယ်။ ‘’
‘’ သူထုတ်ကလည်း ရမ်းတယ် မမရဲ့။
‘’ မဟုတ်ဘူး ဦးခင်ညွန့်ခွေ ကိုသူထုတ်လိုက် လို့တဲ့ ‘’
‘’ အမလေး ညည်း တို့ကဘာသိလဲ။ သူလုပ်လိုက်လို့မေ့ သွားတဲ့ ဟိုကောင်မလေးက ဦးကျော်ဆန်း အသည်းစွဲ လေလေ။’’
'' ဟယ်-ဟုတ်လို့ လားကိုကျော်ဆန်း က ဘုရားတရား သမားကြီး ပါဟဲ့ ''
'' အို - ဒေါ်ဒေါ်ကလည်း ဘုရား တရားသမားတွေက ပို သန်တယ်။ ''
(၀ါးက နဲ - ရီသံများ )
‘’ အော်ဟုတ်လား ‘’
‘’ တင်ထွန်းဦး က မြန်မာတိုင်းမ်စ်ကို လိုခြင်လို့မောင်ပိုင်စီး ခြင်လို့အစိုးရနဲ့ ပေါင်းကြံတာ‘’
‘’ အမေလေးတော်ကြာလွတ်မှာပါ။ သူအစိုးရက အမတ်တယောက်ယောက်လာခေါ်ရင် ထည့် လိုက်မှာပါ။ “
ထူးခြားတာကတော့ ဘယ်သူသေသေ ပရိတ်သပ်က သြဘာပေးမှာပါ။ လောဘသားတွေဟာ ဒီလိုပဲ ဇတ်သိမ်းမလှကြတာကိုးဗျ။